स्थापनाको १६ बर्षपछि साधारणसभा |
स्थापनाको १६ बर्षपछि साधारणसभा
ताम्सालिङ प्राप्तिका लागि आवाज सानो भयो
अमिर योञ्जन संम्वाददाता
Monday, July 8, 2019 । दक्षिण कोरिया
नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाको नवौं कार्यसमितिले आफ्नो पहिलो साधारणसभा सउल दोङ्देमुनमा आइतबार सम्पन्न गरेको छ ।
संस्थाको अध्यक्ष मेघप्रसाद वाइबाको सभापतित्वमा भएको साधारणसभामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष युगेलतेन्डुप शेर्पाको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो ।
औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शेर्पाले पहिचान प्राप्तिको लागि जहाँ रहेपनि आवाज निरन्तर गुन्जाइ राख्नु पर्ने बताए । उनले थपे पहिचान भेटनका लागि सशक्त रूपमा अझ अघि बढ्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेश ३ एकता समाज कोरियाका अध्यक्ष किशोर ब्लोनले जातीय पहिचान संविधानमा मात्र सिमित राखेर पहिचानको अनुभुति गर्न नपाउने भन्दै अब व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले पहिचान पनि भेटिने, द्धन्द पनि मेटिने भनेर मात्र नहुने भन्दै अब यसलाई सरकारले भावना र जातित्वको आधारमा संघीयता प्रणाली अनुसार प्रदेश ३ को नाम नेवाः ताम्सालिङ हुनु पर्ने दावा गरे । उनले आफ्नो मन्तव्यमा छिमेकी मुलुक तथा विश्वमा संघीयता अनुसार नै जातिय, भौगोलिक आधारमा नामाकरण भएको उदाहरणा पेश गरे । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णयलाई ढिलाई गरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले भने, यो राजधानी तोक्ने कुरामा ठुलो षडयन्त्र भइरहेको छ, यो बुझ्न जरूरी छ, यस्तो षडयन्त्रको जोडदार रूपमा खबरदारी गर्न अवश्यक छ । उनले प्रदेशको नामाकरणको बारेमा आदिवासी जनजातिको थात्थालो, जनसंख्या एवं मौलिक साँस्कृतिक अधिकार अनुसार नै हुने पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका सभापति वाइबाले सभालाई विसर्जन गर्ने क्रममा हामी सबैले मौलिक पहिचालाई बचाउदै एक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले संघीयता अनुसार जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. ३ ले नेवाः ताम्सालिङ नै नाम राख्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिको युगमा अनलाइन पत्रिका मार्फत समुदायको हरेक क्षेत्रका विविध विषयलाई राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय एवं मुलाधारमा उजागर गर्दै आइरहेका चार तामाङ पत्रकार सैलुङअनलाइनका अमिर योञ्जन, तेमालअनलाइनका दुधबहादुर लामा, अनलाइन मिडिया वनका किशोर ब्लोन र फोनिज कोरिया डटनेट तथा ओएमसी नेपालका विमल लामा दोङलाई संघले सम्मान गरेको थियो । उनीहरूलाई सम्मान-पत्र र खादाले प्रमुख अतिथिले सम्मान हस्तान्तरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनअरएनए) दक्षिण कोरियाकी अध्यक्ष लक्ष्मी लामा, नागार्जुन गुम्बाका लामा प्रमुख उर्गेन लामा, सउल नेपाल गुम्बाका लामा प्रमुख कुन्साङ दोर्जे लामा, तामाङ समाज ख्याङ्साङनाम्दो बुसानका कार्यबाहक अध्यक्ष सुजित घिसिङ लगायतले शुभकामना दिएका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रमपछि संघको साधारणसभाको विशेष छलफल भएको थियो । विशेष छलफलले संशोधित विधानलाई बहुमतले पारित गरियो । संस्थाको महासचिव गोकुल थोकर, उपाध्यक्ष राजिव घिसिङ, सचिव दुधबहादुर लामा, अमिर योञ्जनको उपसमितिले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । महासचिव थोकरले वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै संघको कोषाध्यक्ष मनोज वाईबाले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कोषाध्यक्षका अनुसार संस्थाले ल्होछार कार्यक्रममा निरन्तर घाटा व्योहोर्दै आइरहेको सुनाए । आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार संघले अघिल्लो आर्थिक पुँजीको ४० प्रतिशत खर्च गरेको देखाएको छ । सरदरमा हेर्दा आम्दानीको ४ गुणाले खर्च भएको देखाएको छ । संघको आर्थिक उपसमिति विघाटन गरी सल्लाहकार आङादावा तामाङको संयोजकमा तीन सदस्य लेखा समिति गठन गरेको छ । सदस्यमा सल्लाहकार सञ्जीप गोले र पार्वती तामाङ चयन गरेका छन् ।
संस्थाको गौतम लामा तामाङको अध्यक्षतामा सन् २००३ सालमा स्थापना भएको थियो । हाल नवौं कार्यकाल चलिरहेको छ ।
संस्कृत भाषाबारे शिक्षामन्त्रीलाई दोस्रो बिरोध पत्र
बहुभाषी नेपालमा मातृभाषा कि संस्कृत भाषा ?
कोभिड–१९, देश-विदेशमा वाम्बुले राई मातृभाषा चिन्तन
संस्कृत भाषा-भ्रम र यथार्थ- १
संघीय शिक्षा पद्धतिमा मातृभाषा र संस्कृत भाषाका सवालहरू
१. बजेटको केन्द्रमा कर्णाली : कार्यान्वयनमा जोड
२. फौजी किराले मकै नष्ट गर्न थाल्यो
३. बजेटमा कुरा दोहोरियो : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई
४. कुहियो स्याउ, कुँडियो मन
५. सगरमाथा दिवसमा सुनसान सगरमाथा